सन्दर्भ :- गणतन्त्र दिवस – शासन फेरियो ,प्रवृत्ति दोहरियो « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १७:५१
मुलुक गणतान्त्रिक आवरणमा फेरिएको १२ वर्ष पूरा भएछ । ०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो वैठकले २३८ वर्षीय पुरानो शाहवंशको जरो उखेल्दै गणतन्त्र नेपालमा रुपान्तरण गरी दियो ।
गणतन्त्र आएपछि त चमत्कारै हुुन्छ भन्ने आम जनताको आकांक्षा थियो । तर यस अवधिमा भए गरेका कामले जनता नै शासनसत्ताको मालिक भन्ने कुनै छनक मिलेन । बरु गणतन्त्र नेपालले राजा–महाराजालाई लखेटेर त्यो स्थान आफूले ओगट्ने दाउका रुपमा बुझ्ने अवस्था आयो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको आधुनिक नेपालको संरचना त फेरिएको छ , तर शासक बर्गको सोच र शैली भने उस्तै छ । बरु अझै कडा पो देखिन्छ । साथै नयाँ खाले समस्या र विकृति थपिएका छन् ।
जननिर्वाचित सरकारलाई “मेरो सरकार” भनेर शाही शासनको झल्को दिने गरिएको छ । उनको सवारी चल्दा सर्वसाधारणले घण्टौं बाटो कुर्नुपर्छ । विदेश जानु पर्दा पनि अकाशमा समेत सर्वसाधारण यात्रुले फन्को मार्ने वा डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । के यसैका लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो ? दशौं हजार नेपालीको बलिदान विद्यादेवीलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीका राख्नका लागि मात्र हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विस्तारै गणतन्त्र नेपालमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर साम्यवाद स्थापनामा अग्रसर भएका त होइनन् ?
गणतन्त्रको मुद्धा नेपाली कांग्रेस स्थापना भएसँगै उठेको हो । राजा त्रिभुवनकै प्रस्तावमा कांग्रेसले यो अभियान थालेको थियो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै गणतन्त्रको मुद्धा पनि ओझेलमा प¥यो । यसैक्रममा ०१७ साल पुस १ गते राजनीतिले नयाँ मोड लियो । राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । अनि गणतन्त्रको मुद्धा त्यसै सेलाएर गयो ।
लामो अन्तरालपछि ०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनसँगै फेरि गणतन्त्रको मुद्धाले महत्व पायो । ०५९ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्ने अभिरुचि देखाएपछि सेलाइसकेको गणतन्त्रको मुद्धा एकाएक सतहमा आयो । नेपाली कांग्रेस , एमालेलगायत सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच गणतन्त्र स्थापनाको मुद्धामा सहमति भएपछिको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको जग भत्काइदियो । आन्दोलन सफल भएपछि नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि करिब १७ हजार नेपालीको रगत बगेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यतिका मानिसले ज्यान गुमाउनु प¥यो । अहिले गणतन्त्र आएको छ । राजा छैनन् अहिले मुलुकमा । जनताको शासन स्थापना भएको भनिएको छ । शाहवंशले राजपाठ जनताको नासो भन्दै बुझाइसकेको छ । उनको स्थानमा अहिले राष्ट्रपतिको पदावली थपिएको छ ।
नेपाली जनताले सर्वाेच्च पद राष्ट्रपति पाएको छ । त्यो पदमा अहिले जनताकी छोरी महामहिम विद्यादेवी भण्डारी आसिन भएकी छन् । तर भण्डारीको पछिल्लो कार्यशैली चाहिं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा चर्काे छ । नयाँ महारानीको स्वरुपमा गणतन्त्र नेपालले विद्यादेवीलाई व्यहोर्नु परेको छ । उनको संसदमा प्रवेश हुदाँ लावा लस्करसहित बग्गीमा सवारी हुनेगर्छ । त्यस्तो दृश्य विगतमा राजा–महाराजाले समेत देखाएनन् ।
महामहिम राष्ट्रपतिको बोल्ने शैली र चाला शाही अन्दाजमा हुने गर्छ । जननिर्वाचित सरकारलाई “मेरो सरकार” भनेर शाही शासनको झल्को दिने गरिएको छ । उनको सवारी चल्दा सर्वसाधारणले घण्टौं बाटो कुर्नुपर्छ । विदेश जानु पर्दा पनि अकाशमा समेत सर्वसाधारण यात्रुले फन्को मार्ने वा डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । के यसैका लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो ? दशौं हजार नेपालीको बलिदान विद्यादेवीलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीका राख्नका लागि मात्र हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विस्तारै गणतन्त्र नेपालमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर साम्यवाद स्थापनामा अग्रसर भएका त होइनन् ? यस्ता कैयन प्रश्न उठेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना त गरियो , तर यसमा नेपाली जनताको भावना बुझ्ने काम भएन । ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रतिको असहमति नै गणतन्त्र स्थापनाको आधार बनाए, ठूला राजनीतिक दलहरुले । शाही सरकार स्थापना गरी एकलौटी हिंडेका ज्ञानेन्द्रले जनभावना बुझ्न नसकेकै हो, त्यतिखेर । उनले ०५९ माघ १९ मा सरकार अपदस्थ गरेपछि सात राजनीतिक दलले आह्वान गरेको आन्दोलन रत्नपार्कमा सीमित भएको थियो । दलका नेता र आफन्तको कार्यशैलीप्रति आम जनता रुष्ट थिए ।
त्यसैले ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदा पनि मौन बसी दिए । जनताको मौन स्वीकृतिलाई राजाले आफू अनुकुल बुझें । र , पञ्चायतकालमा असफल भईसकेका थोत्रा मानिसलाई ल्याएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए । साथै जनताको सुसूचित हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने मनसायले सञ्चारमाध्यममा आतंक मच्चाउन थाले । यही भूलले गर्दा पत्रकार जगत सडकमा ओर्लियो । त्यसैको बलमा सल्किएको आन्दोलनमा माओवादी पक्षसमेत समाहित भएपछि ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्नु परेको थियो । त्यसैले गर्दा देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
गणतन्त्र आएको अनुभूति अहिले केवल ओली सरकारका आसेपासे र महामहिम विद्यादेवी भण्डारीलाई मात्र । बिगतमा कांग्रेस,मधेशवादी दल तथा माओवादीका नेतागण र तिनका आसेपासेलाई मात्र । आम जनतालाई परिर्वतनको कुनै सुखानिभुत हुन सकेको छैन । जनताको दुखजिलो हिजो भन्दा आज झन बढेको छ , घटेको छैन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको गल्ती कमजोरीलाई आधार बनाएर लहड र आक्रोशकै कारण नेकपा माओवादीसहित सात राजनीतिक दलले एकपक्षीय रुपमा गणतन्त्र घोषणा गरिदिए । यस्तो दूरगामी महत्वको मुद्धामा नेताहरुले जनमत लिने आवश्यकता बोध गरेनन् । साथै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्तो संवेदनशील मुद्धालाई पनि बलात् लाद्ने काम भयो । जनताको चाहना र भावनाको कदर गर्दै जनमत संग्रह गरेर मात्र यस्तो गहन निर्णय नलिएकै कारण आज हामीले नयाँ राजतन्त्र बेहोर्नु परेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछिका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जनताको मन छुने काम गर्न चासो देखाएनन् । तर महामहिम विद्यादेवीले पनि त्यस्तो कुनै भान दिएको आभास भएन ।
शासन फेरियो , तर सोच र शैली फेरिएन – अहिले अधिकांश नेपालीको गुनासो यही हो । गणतन्त्रले केवल राजाको अस्तित्व नामेट ग¥यो । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आएका छन । शासन शैली र व्यवहार भने अझैं पुरातनी नै छ । राष्ट्रपति पदमा आसिन महामहिम विद्यादेवी देशको राष्ट्रपति बन्न सकिनन् । उनी एमाले पार्टीको घेराभित्र मात्र रमाउने काम भएको छ । उनलाई एक कार्यकालले नपुगेर दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपतिका रुपमा आसिन गराइएको छ । आलंकारिक राष्ट्रपति दुई कार्यकाल दिने चलन संसारमा कहीं कतै भएको जानकारी छैन । तर केपी ओलीले बलपूर्वक यो निर्णय गराएर नेपालमा नयाँ परिभाषा दिने प्रयास गरेका छन् ।
आउने वुधबार हामी फेरि पनि गणतन्त्र दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने तयारी गरिरहेका छौं । सरकारले यसको तयारी तामझामका साथ गरिरहेको छ । तर नेपाली जनतालाई भने यसले छोएको छैन । गणतन्त्र आएको अनुभूति अहिले केवल ओली सरकारका आसेपासे र महामहिम विद्यादेवी भण्डारीलाई मात्र । बिगतमा कांग्रेस,मधेशवादी दल तथा माओवादीका नेतागण र तिनका आसेपासेलाई मात्र । आम जनतालाई परिर्वतनको कुनै सुखानिभुत हुन सकेको छैन । जनताको दुखजिलो हिजो भन्दा आज झन बढेको छ , घटेको छैन् ।